Chromium, Chrome kana zvinobva. Zvinhu zvekuita sarudzo. | Linux Addicts
Sezvaunoziva, pakati peMozilla Foundation neni pane chimwe chinhu chemunhu. Izvozvo kunze imwe forogo yeFirefox yakatotaurwa naDarkcrizt kuti ndakanga ndisati ndawana mukana wekuyedza, inondisiya seimwe nzira yeGoogle Chrome kana chero yeanobva chikamu chemahara chekodhi yayo. Asi musiyano upi?
1 Chromium, Chrome uye zvinobva. Kufanana uye kusiyana
2 Ndeipi yekusarudza?
Chromium, Chrome uye zvinobva. Kufanana uye kusiyana
Ngatitange nekutaura kuti Chromium yakavhurika sosi. Chero ani wedu anogona kudhawunirodha yako sosi kodhi kubva kuGitHub, igadzirise, uye gadzira yako wega browser. Ndizvo zvinoitwa nevagadziri veBrave, Vivaldi uye Edge. Zvinoenderana nematemu erezinesi zvinogoneka kuwedzera mabhenefiti pasi pekodhi kodhi. Izvi ndizvo zvinoitwa neGoogle Chrome kana Vivaldi.
Pakutanga gore rino nhau dzakaputika kuti Google, munhu mukuru ane mhosva yekuvandudzwa kweChromium, akasarudza kuita kuti zvinhu zviomerwe nevakwikwidzi vayo. Iyo kambani yakaona kuti mamwe mabhurawuza anokwikwidza eChromium anopa ega maficha eChrome nekutora mukana wemaseva eGoogle. Pakati pavo aya ekubatanidza mabhukumaki, mapassword uye data uchishandisa Google account. Zvakare kuita mafoni kuburikidza neInternet uchishandisa browser. Iwo mabasa akanyangarika kubva kuChromium nepo mabhurawuza akatorwa akashandisa zvawo akasiyana.
Nezve kuisirwa macodecs kuburitsa zvirimo kubva kumasaiti ekutepfenyura, Google Chrome yatove nayo yakaiswa uye mabhurawuza anotorwa anopa sarudzo yekuzviita. MuChromium unofanira kuzviita nemaoko.
Chromium inouya mumatura eiyo huru Linux kugovera (MuUbuntu uye zvinobva kunze kweLinux Mint mune Snap fomati) Google Chrome inogona kutorwa muDEB uye RPM mafomati plus source code. Nzira mbiri dzekutanga dzinowedzera repository inobata zvigadziriso. Nezve dzimwe sarudzo:
Vivaldi: DEB uye RPM mafomati
Kushinga: DEB, RPM, SNAP.
Microsoft Edge neGoogle Chrome mabhurawuza, kunyangwe ichipa maficha ekudzivirira kusazivikanwa kwemushandisi, inoda kuronda ruzivo rwako kuti ipe zvizere kushanda. Pakati pezvinobva, iyo inonyanya kutariswa pakuvanzika ndeye Brave, iyo inobatanidza yakavanzika modhi yakabatana neTor network uye inovhara kushambadza uye matracker kuti masaiti asazvione uye adzivise kuita.
Kune chikamu chayo, iyo Opera browser, mukuwedzera kune ad blocker, inosanganisira yemahara yakabatanidzwa VPN yaunofanirwa kumisa uye kusarudza nzvimbo.
Panyaya yeVivaldi, ivo vanosimbisa hukuru hweiyo yakasanganiswa ad blocker pamusoro pekuwedzerwa nebasa rimwechete. Iinewo crawl inhibitor.
Chromium haitumire data kune chero ani zvake, asi haina kupa ad-blocking kana yekutevera maficha.
Pane akasiyana mawebhusaiti izvo zvinokutendera kuti uenzanise mashandiro ebrowser kubva kune chinangwa chechiratidzo, asi kunze kweizvozvo kune maitiro emunhu. Mumwe wangu Pablinux anonyanya kushandisa Vivaldi. Nekuda kwangu, ndinogovanisa nguva yangu yekubhurawuza pakati shinga y Microsoft Edge. Hushingi hunondichengetera toni yenguva yekushambadza, pamwe nekubatanidza yakavakirwa-mukati BitTorrent mutengi wekurodha. Nekudaro, ini ndanga ndisati ndakwanisa kunzwisisa iyo yakaoma QR kodhi yekubatanidza maitiro. Kuwiriranisa pakati pezvishandiso, ini ndinoshandisa Edge, ine inoshanda nzira yekupinza mapassword uye mabhukimaki, kunyangwe kutonga anofarira kana uine nhamba huru hakusi kunyanyo gadzikana. Simba rayo ndiko kubatanidzwa neMicrosoft web services. Iyo yakavakirwa-mukati muturikiri uye yakavakirwa-mukati pdf muverengi anobatsirawo zvakanyanya.
Pasina kupokana, kana ukashandisa Google masevhisi akadai seGmail kana Youtube, Google Chrome inokupa iwe zvakanakisa mhedzisiro, nepo iwe uchitsvaga browser isina bloatware, haugone kumira kuedza Chromium.
Handikwanise kutaura zvakawanda nezvazvo dhanzi, handina kuishandisa sezvo yaive kambani huru yeScandinavia (ikozvino yava mumaoko eChinese) zvisinei ndine rudo rukuru nazvo. Yaive nzira yehupenyu iyo vashandisi veLinux vaifanira kuwana masaiti aingotsigira Internet Explorer. Kana iwe ukaishandisa uye uchida kutiudza zvaunoda, pane fomu rekutaura pazasi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Chromium, Chrome kana zvinobva. Zvinhu zvekuita sarudzo.
Ndakashandisa Vivaldi uye parizvino Brave. Mabhurawuza ese ari maviri ane kuwedzera kwekuvanzika uye asinganzwisisi anovhara YouTube marara pakati pevamwe. Vivaldi inogoneka, Brave haina. Vivaldi ndeyemuridzi, Brave ndeye yakavhurika sosi. Ndakazosarudza Brave nekuti pakugadzira mawebhusaiti neWebApp Manager uye nekuamhanyisa, Brave inodzokorora kukiya zvakavanzika paWebApp uku Vivaldi asingadaro.
Zvinonakidza chaizvo. Handina kuzviziva
Ini ndinoita zvakanaka kwazvo neFirefox inounza Linux Mint mune yayo repository, ini handina zvichemo, uye sechipiri browser Microsoft's Edge Chromium.
"Ini handina kukwanisa kunzwisisa maitiro ayo akaomarara ekuwiriranisa neQR"
Kuchema kwakanaka, hazvina kuoma. XD
Zvakakuomera here kuti utore foni uye utarise QR kubva kuBrave Browser app paAndroid / iOS, kana kungopfuudza makiyi e "sync" kuburikidza neTeregiramu manotsi uye kukopa nekuisa?
Pindura kuna Liam
Handina kumbobvira ndaita kuti zvishande
Kufa kwaJay Last. Zvakanaka kune mumwe wevatangi veSilicon Valley